Mijanona ao amin'i Jesosy - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-04 > Mandria an'i Jesosy
Rehefa vita ny asanao dia te hiala sasatra tsara ianao. Avelany hivezivezy amin'ny fahatsoram-po mamy ny fanahiny mba ho afaka misosa mora sy hanangona hery vaovao. Ny sasany dia mahita fialan-tsasatra amin'ny fanatanjahantena sy ny natiora na mankafy ny fitsaharany amin'ny endrika mozika na famakiana manaitaitra.
Amin'ny "tony" dia midika hoe fiainana hafa tanteraka amin'ny fiainana aho. Tiako hamerina azy io amin'ilay fitenenana hoe "fitsaharana ao amin'i Jesosy" izy ity. Izany no ilazako ny fahatoniana anaty izay mahatanteraka sy miala voly. Manana fitsaharana ho antsika rehetra Andriamanitra noho izany raha tena misokatra sy mandray tsara azy isika. Ny "vaovao mahafaly", ny filazantsara dia ahitana ny famonjena anao amin'ny alàlan'i Jesoa Kristy. Ny tanjona dia ny handova ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy ary hiaina ao amin'ny fitsaharany mandrakizay. Amin'ny teny hafa, miala sasatra amin'i Jesosy.
Mba hahatakatra izany dia mila "misokatra ny sofin'ny fo". Satria manana fitoniana toy izany ho an'ny olon-drehetra Andriamanitra, dia ny faniriako lalina ny hahafahanao miaina sy milamina izao fahatoniana izao.
Amin'izao fotoana izao aho dia mieritreritra ny fihaonan'i Nikodemosy, iray amin'ireo lehiben'ny Jiosy ary Jesosy. Nikodemosy nankany amin'i Jesosy tamin'ny alina, ka nanao hoe: «Raby, fantatray fa mpampianatra izay nirahin'Andriamanitra ianao. Satria tsy misy olona afaka manao fahagagana tahaka anao rehefa tsy eo aminy Andriamanitra. Namaly i Jesoa hoe: Lazaiko aminareo: Raha misy olona tsy ateraka indray, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra ». Ny tantara manontolo dia azo jerena ho an'ny fahatakarana tsara kokoa ao amin'ny Jaona 3,1: 15.
Mila ny Fanahy Masina ny mahita ny fanjakan'Andriamanitra, Nikodemosy, ary anio koa. Mitsoka manodidina anao izany, tahaka ny rivotra izay tsy hitanao akory fa ny fiantraikany mahazo anao. Ireo fiantraikany ireo dia mijoro ho vavolombelona amin'ny herin'andriamanitra izay manova ny fiainanao satria tafaray amin'i Jesosy ao amin'ny fanjakany ianao.
Nifindra tamin'izao androntsika izao, dia nametraka an'ity fomba ity aho: Raha tena te hofenoina sy tohanan'ny fanahin'Andriamanitra aho dia tsy maintsy manokatra ny saiko ary ho vonona hahafantatra sy hanaiky an'Andriamanitra amin'ny endriny rehetra. Mila “eny” aho amin'ny foko rehetra, tsy an-tery.
Vetivety dia amin'ny fotoan'ny Advent sy ny krismasy ianao. Tsaroan'izy ireo fa tonga zanak'olombelona i Jesosy, Zanak'Andriamanitra. Lasa iray niaraka taminy isika. Inona no mitranga, io fahatoniana anaty sy fahatoniana ny fiainana io, na izaho na ny olon-kafa afaka mamorona. Izany dia fahagagana lehibe sy fanomezana avy amin'Andriamanitra fotsiny satria sarobidy isika rehetra.